Home News Kheyre oo wada Qabaqaabada shir lagu kalajebinayo Muddoloodka, kadibna loo Gudbayo Beesha...
Kheyre oo wada Qabaqaabada shir lagu kalajebinayo Muddoloodka, kadibna loo Gudbayo Beesha H/Gedir iyo Beelaha kale.
Waxaa soo baxaya warar sheegaya inuu RW Xasan Kheyre uu ka shaqeynayo inuu Wasiirka Amniga u ballamiyo muddullood, si uu sheego inuu wax ka badalayo xaaladda luggooyo iyo dhibaato ee uu magaalada ku hayo. Wasiirada Ducaale iyo Dahir Mxaamud Geelle ayaa waxay rabaan inay u muujiyan Farmajo iyo Kheyre inay iyagu horboodayaan reerka tan oo ah marka ay dan leeyihiin, balsa aan dhibsan xaalladda ay magaalada ku sugneyd maadaama ay gawaari qabow ku socdeen.
Waxaa soo baxay inuu Farmaajo ku yiri uma haysto inaad wakiil ka tihiin reerahiinna, hadda iyaguna waxay ballaqaadeen in ay muddullood u soo xareyn doonaan burrito RW Kheyre. Guud ahaan mudduloodka siyaasiyiintooda waxay ka mqan yihiin dalka. Sidoo kale waxaa dalka ka maqan xildhibaanada Muddullood maadama uu barlamaanku fasax ku jiro. Waxaa kaloo isagana dalka ka maqan Ugaaskii beesha Ugaas Maxamud Cali Ugaas.
Xasan kheyre ayaa wada dadaallo uu rabo inuu kooxo aan wakillo muddulood ka ahayn balsa u dhashay muddullood inuu ka saxeexo inay raalli ka yihin taallaabooyinka ay dawladdu qaadeyso sida burburinta ganacsiyada lagu sheegayo sharcidarrad sida afarta Jardiino ee Maanabolyo iyadoo shirkaan muddullood kan ku xigaa uu yahay mid loo qabanyo Habargedir si iyagana looga saxeexo inay raalli kayihiin xernaanta magaalada iyo burburinta ganacsiga hawiye sida dhulalka ay dadku leeyihiin, kuwaas oo dhammaantood si sharci ah dawladihi hore ay u bixiyyen.
MW Farmajo waxaa uu hadda u egyahay qof ay talo ka dhammaatay waayo waxaa uu u muuqdaa inuusan awoodin inuu isbadalka ku ameeeyo RW oo ah shakhsiga hoggaanxumadiisa ku kharibbay dalka, walina ku sii wada xanuunka iyo dagaal keeni kara aano qabiil.
Dadka muqdisho waxay kuu sheegayaan inay noloshoodu ay khater gashay oo wax la cuno la la’yahay, magaaladana ay kala xeran tahay.
MW Farmaajo oo bixiya ammarro uusan fulin Karin.
Madaxweynaha ayaa xalay waxaa uu u sheegay guddiga difaaca in magaalada la furo 48 saac gudahood, hasa yeeshee maaha markii ugu horreysay ee uu amar noocan ah bixiyo waana foolxumo inuu bixiyo amar awood uu ku fuliyo uusan lahayn.
RW Kheyre iyo Fahad ayaa Farmaajo u sheega inay guushu soo dhowdahay oo dadka Muqdisho jilbaha dhulka loo dhigay mar dhowna ay iyaga iyo ganacsatadooda soo shirbi doonaan. Maalinta berito ahna kulanka uu Kheyre qabashadiisa dhexmarsiiyey Ducaale ayaa Farmaajo loogu sheegay inay mudduloodku soo shirbi doonaan oo ay oran doonaan “Noolow ma daale”.
Kulanka oo la hubo inuusan muddullood u dhameyn oo uu Ugaaskii iyo Xildhubaandiiba dalka ka maqan yihiin waxaa uu noqonayaa Fashil mid ku dhammaada, laakiin waxaa uu keeni karaa siyaasadda uu Kheyre raainayo oo ah inuu muduloodka kala jabo, kaibna Habgedir la kala jebiyo si waxa uu rabo uu magaalada uga sameeyo.
Waxaa la soo gaaray xelligii ay Muqdisho soo cehsan lahayd awoodeeda federal oo ay iyadu maamulan lahayd dawladaheeda hoose, iyadoo mar waliba talo xoog leh ku yeelaneysa hoggaanka dalka maadaama ay iyadu bixiso dhaqaalaha ay dawladda ku dhisan tahay. Waa in mar waliba Muqdisho lagala tashadaa cidda la kenayo si uusan RW u noqon qof magaalada in la curyaamiyo ka shaqeyn kara mar dambe.
Dhibaatada lagu hayo beesha Mudulood ee Muqdisho halka hoose ka daawo
Previous articleRW Kheyre $200 Kun oo doolar ku bixiyay in shir beesha Mudulood loo qabto maalinta berito!
Next articleRW Kheyre oo qarash ku bixiyay in uu ka qaybgalo shir wasiiro lagu martiqaaday! Ceebna usoo hooyay Somaliya…(sawiro)